(Sawiro) Wasiirka Maaliyadda Puntland Oo Kulan La Qaatay Xildhibaano, Maamulka gobolka Sanaag Iyo Madax Kale | puntlandi.com
(Sawiro) Wasiirka Maaliyadda Puntland Oo Kulan La Qaatay Xildhibaano, Maamulka gobolka Sanaag Iyo Madax Kale
Wasiirka Wasaaradda Maaliyada C/laahi Shiikh Axmed ayaa kulan gaar ah u qabtay qaar ka mid ah madaxda Wasaarada Maaliyada , Xisaabiyaha Guud Mr. C/risaaq Siciid Nuur , Xildhibaano kasoo jeeda gobolada Haylaan iyo Sanaag , guddoomiyeyaasha goboladaas, Booliska gobolladaas, iyo madaxda Maaliyada ee labada gobol .
Guddoomiyaha Gobolka Sanaag Maxmuud Ciyoon ayaa Warbaahinta Puntlandi u sheegay in ujeedada kulanka ay ahayd shaqada Wasaaradda ee Gobolada Sanaag iyo Hayland.
”Ujeedka kulanka ayaa ahaa in wasiirku warbixin ka dhegeysto shaqada maaliyada ee labada gobol ee Sanaag iyo Haylaan , iyo sidii loo dar dar gelin lahaa wax soo saarka iyo dakhliga,Waxa kale oo la isku booriyey wada shaqayn iyo in talo soo jeedinta madaxda la dhegeysto , si ay goboladaasi isugu fillaadaan” Ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Sanaag.
Xildhibaanada iyo madaxda labadaas gobol ayaa wasiirka uga mahad celiyey kulankan iyo sida uu muhiimada u siinayo in dakhli loo sameeyo goboladaas. Dhankoodana waxay ballan qaadeen iney la shaqaynayaan shaqaalaha maaliyada ee gobolada Sanaag iyo Haylaan.